မိတ်ကပ် တွေ ရောင်းအား တက်စေတဲ့ အလှအပ ရေးရာ ဘလောက်ဂါတွေရဲ့ ဝင်ငွေ ဘယ်လောက် ရှိလဲ။
မိတ်ကပ် တွေ ရောင်းအား တက်စေတဲ့ အလှအပ ရေးရာ ဘလောက်ဂ...
13 ก.พ. 2562 - 17:43 น.
အွန်လိုင်း ဗြူးတီး ဆယ်လီ ကယ်လီ ဂျန်နာ ဟာ ကိုယ်ပိုင် အမှတ်တံဆိပ် ထုတ်လုပ် နိုင်ခဲ့ပြီး ဝင်ငွေ သန်းချီ ရရှိ
အနောက် နိုင်ငံတွေမှာလည်း အလှကုန် ပစ္စည်း အကြောင်း၊ မိတ်ကပ် ပြင်ဆင် ခြယ်သ ပုံ အကြောင်း ဗီဒီယိုတွေ နဲ့ ရှင်းပြ ကြတဲ့ ဗွီလော့ဂါ တွေ ပေါက်ပေါက် လာမှု က ၂၀၁၈ ခုနှစ် တခုတည်းမှာ တင် အများအပြား ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုရီးယား နိုင်ငံမှာ ဆိုရင်လည်း ဗြူးတီး ဘလောက်ဂါ လုပ်ကြသူတွေ၊ အလှကုန် ပစ္စည်း အကြောင်း ဝေဖန် သုံးသပ် ကြသူတွေ အများအပြား ရှိပါတယ်။
ဆိုတော့ သူတို့ တွေအထဲမှာ လူသိထင်ရှား ရှိတဲ့ ဗြူးတီး ဘလောက်ဂါတွေ က ဘယ်သူ တွေများပါလဲ။ ကိုရီးယား အလှကုန် ဆိုတာဘာလဲ။ အောင်မြင်တဲ့ ဗြူးတီး ဘလောက်ဂါ တယောက်ရဲ့ ဝင်ငွေ က ဘယ်လောက် ရှိပါသလဲ။
အလှအပ ရေးရာ ဝေဖန် သုံးသပ်တဲ့ ဘလောက်ဂါတွေ ဝင်ငွေတိုးတက်လာ
အဲဒီ ဗီဒီယိုတွေ၊ ဓါတ်ပုံတွေ နဲ့ အလှအပ ရေးရာ အကြောင်း ဝေဖန် သုံးသပ် ကြသူတွေ ကြောင့် အလှကုန် ပစ္စည်း ရောင်းချ ရမှု တိုးတက် လာ တယ်ဆိုတာ ဈေးကွက်မှာ ငြင်းမရတဲ့ အကြောင်းအရာ တစ်ရပ် ဖြစ်ပါတယ်။
သွင်ပြင် ဆန်းပြား တဲ့ အွန်လိုင်း မိတ်ကပ် ဆယ်လီ ဂျက်ဖရီ စတား
အလှကုန် တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဗြူးတီး ဗီလော့ဂါ ထဲမှာ လော့စ် အိန်ဂျလိစ် အခြေစိုက် တဲ့ ဂျက်ဖရီ စတား က လူသိများ ထင်ရှားပါတယ်။
သူ့ရဲ့ ယူကျူ ပေါ်မှာ အလှကုန် ပစ္စည်း တံဆိပ် တစ်မျိုး ကို အသုံးပြုပေးရင် ဒေါ်လာ တစ်သိန်း ခြောက်သောင်း ပေးမယ်လို့ ကုမ္ပဏီ တခု က ကမ်းလှမ်း ခဲ့ကြောင်း ဂျက်ဖရီ က သူ့ရဲ့ တွစ်တာ ပေါ်မှာ မကြာသေးခင် က ထုတ်ဖော် ပြောကြား ခဲ့ဖူးပါတယ်။
နာမည်ကျော် အနုပညာရှင်တွေ အသုံးပြုတဲ့ မိတ်ကပ် ကုန်ပစ္စည်း က ရောင်းအား ပိုသွက်
MMMMitchell က အင်စတာဂရမ်မှာ ဖော်လိုဝါ ရှစ်သိန်း အထိ ရှိ
၄။ နာမည် မကြီးတဲ့ အွန်လိုင်း ဘလောက်ဂါတွေရဲ့အခွင့်အလမ်း
အွန်လိုင်း ဆယ်လီ ဘလောက်ဂါ တွေ ပဲ ကြော်ငြာခ ကနေ ဝင်ငွေ အများအပြား ရရှိနေယုံတင် မဟုတ်ပါဘူး။ နာမည် မကျော်သေးတဲ့ ဆယ်လီ တွေလည်း ဝင်ငွေ ရနိုင်တဲ့ အချက်တွေ ရှိပါတယ်။
အဲဒီဗီဒီယို ကြောင့် ညတွင်းချင်းပဲ သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက် အင်စတာဂရမ် မှာ လိုက်ခ် လုပ်သူ တစ်သိန်းကျော် အထိ ရရှိခဲ့ပါတယ်။
မိတ်ကပ် ထူထူ လိမ်းမယ့် အစား ပါးပါးလိမ်းထားတဲ့ မိတ်ကပ်က သဘာဝ လို့ မိတ်ကပ် ကျွမ်းကျင်သူ ဘော်ဘီ ဘရောင်း က ဆို
သူဟာ ၂၀၀၆ ခုနှစ်တုန်း က သူ့နာမည် နဲ့ ကိုယ်ပိုင် မိတ်ကပ် ထုတ်လုပ် ရောင်းချ ခဲ့သူ နာမည်ကျော် တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အသားအရေ ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး ပစ္စည်းတွေက အရောင်းသွက်
သူက အခြေခံ အသားရေ အလှ ကုန်တွေကို တခြား နာမည်ကျော် Luxury ဇိမ်ခံ ပစ္စည်းတွေ ထက် ဈေးသက် သာတဲ့ နှုန်းထားနဲ့ ရောင်းချခဲ့ လို့ ဖြစ်တယ်လို့ ကုမ္ပဏီ ဘက်က ပြောပါတယ်။
ကိုရီးယမ်း ဗြူးတီး ခေါ် ကေ-ဗြူးတီး က အနောက်နိုင်ငံတွေမှာလည်း ရေပန်းစား
အဲဒါ ကို နိုင်ငံတကာမှာက ကေ-ဗြူးတီ (K-Beauty) လို့ ခေါ်ဝေါ် ကြပါတယ်။ ကေ-ဗြူးတီး လို့ ခေါ်တဲ့ မျက်နှာပြင် ကြည်ကြည်လင်လင် ဝင်းဝင်းပပ လေး ဖြစ်စေဖို့ အဆင့်ပေါင်း ၁၂ ဆင့် လောက် ဆောင်ရွက် ရပါတယ်။
အဲဒီမှာ Serum လို့ ခေါ်တဲ့ အသားအရေ ကြည်လင်ဆေးတွေ လိမ်းချယ်တာ၊ အလှဆီတွေ အသုံးပြုတာ၊ အချဉ်ဓါတ် ပါတဲ့ အသားအရေ ကြည်လင် စေတဲ့ အက်စက် အပျော့စား သုံးတာတွေ ပါဝင် ပါတယ်။
နောက်ပြီး ညအိပ်ရာ မဝင်ခင်မှာ မျက်နှာ ပေါ်ကို မက်စ် Mask တွေ ဝတ်ဆင် ကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး အတွက် ထုတ်ကုန် ပစ္စည်းတွေကို သတိထားဖို့ လိုအပ်
အလှကုန် ပစ္စည်းတွေ ထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီတွေဟာ ကုန်ပစ္စည်း ထုပ်ပိုး ရာမှာ ပလက်စတစ်ကို အလွန်အကျွံ အသုံးပြုနေကြဆဲပါ။ ပြီးတော့ အလှကုန် ကြော်ငြာ တွေ လုပ်ရာမှာလည်း ပြန်လည် အသုံးချလို့ မရတဲ့ ကတ်ထူပြား တွေကို သုံးကြ ပါတယ်။
အလှကုန် အမှတ် တံဆိပ် တွေ ဟာ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး အတွက် လုပ်ဆောင်ဖို့ အချိန် ရောက်ပြီ၊ တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံမှု လုပ်ဆောင် သင့်ပြီလို့ ဗော့ခ် မဂ္ဂဇင်း အလှအပရေးရာ အယ်ဒီတာ ဖန်မီ ဖက်တို က ပြောပါတယ်။
အသားအရေ အားလုံးကို ကိုယ်စားပြုနိုင်ဖို့ တကိုယ်ရေသုံး အလှကုန် ပစ္စည်းတွေ ထုတ်လုပ်
อัลบั้มภาพ မိတ်ကပ် တွေ ရောင်းအား တက်စေတဲ့ အလှအပ ရေးရာ ဘလောက်ဂါတွေရဲ့ ဝင်ငွေ ဘယ်လောက် ရှိလဲ။